Abiyyii fi Isayyas yakka waraanaan Mana murtii Addunyaan(ICC) himatuuf deemu! – Kichuu
#Abiyyii fi #Isayyas yakka waraanaan Mana murtii Addunyaan(ICC) himatuuf deemu!
Yaa waaqa oromoo inuma jirta!
MM Abiyyi Ahimad fi President Isaayyas Afewerqii Mana Murtii Addunyaa (ICC) tti himanni yakka waraanaa irratti banamuuf qarqara gahuun beekame. Himanni yakka waraanaa kun ajjeechaa, buqqaatii fi darara lammiilee guutuu biyyattii keessatti, addatti ammoo naannoo Tigraay, Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti raawwataamaa jiran kan hammaate jedhameera.
Mootummaan Itoophiyaa MM Abiyyi Ahimad hoogganamu waggaa sadan kana keessatti Oromiyaa fi guutuu Itoophiyaa keessatti yakka waraanaa gurguddaa raawwateera.
Yeroo waggaa 3tti dhiyaatu kanatti Oromiyaa keessatti qofa lammiilee nagaa 7000 caalutu ajjeefame. Dhibba hedduunn mana hidhaarraa baafamanii ajjeefamaman. Kuma hedduutu ilaalcha siyaasaa qabuun ukkaamsamee dararamaa jira.
Tigraay keessatti karaa mul’atee hin beekneen mootummaa biyya alaa waliin tahuudhaan lammiileen jumlaan ajjeefamuu, saamamaa jiraachuu dhaabileen Idil-Addunyaa ragaa bahaa jiru. Beenishaangul Gumuz keessatti dhumaatiin yeroo ammaa deemaa jiru maddi isaa mootummaa dha.
Kana hunda walitti qabuun himanni yakka waraanaa Abiyyi Ahimad fi Isaayyas Afewerqii irratti qoohaa’aa jira. Ajjeechawwan haga ammaa raawwataman qaama bilisaan akka qorataman Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii muddee gaafataa jira.
Kunis dhimma yerooti malee hoggantoonni lamaan kun yakka raawwataa jiraniif akkuma hogganaa Sudaan duraanii Hasan Al-Beshir mana murtiitti dhiyaachuun waan harka isaanii akka argatan shakkiin hin jiru.